ပင်စိမ်းပင်အိမ်မှာ စိုက်ပျိုးသင့်သော အကြောင်းရင်း - Pyone Pyone Lay
1. ပင်စိမ်း အရွက် ကိုနေ တိုင်းစားပေးခြင်းအားဖြင့် အူလမ်းကြောင်း ဝမ်းဗိုက် နှင့် ပါးစပ်တွင်ဖြစ် တက်သောရောဂါ များ ကင်းဝေးပီး အစာခြေ စနစ် ကိုကောင်းမွန်စေ ပါသည် ။
2. ပင်စိမ်း အရွက်ကို ရေထဲတွင် စိမ်ပြီး နေတိုင်းသောက် လာပါက ဆီးချိုရောဂါ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးသည် ။
3. ပင်စိမ်း အရွက်ကို ပထမရက် ရေချိုးမည့်ရေတွင် စိမ် ထားပြီး နောက်နေ့ရေ ချိုးပါက ချွေးအနံ့ မထွက်အောင် ကာကွယ်ပေး သည် ။
4. ပင်းစိမ်း အရွက်ကို သံပုရာရည်ရော ၍ကျိတ်ပြီး အရေပြားပေါ် တွင်လိမ်းပေးပါက အရေပြားရောဂါများဖြစ်သောဝဲ နှင်းခူ နှင့် ယားနားများပျောက် ကင်းသည် ။
5. ပင်စိမ်း စေ့ကို ကောင်းစွာကျိတ်ပြီးစားပေးလျှင် ဆီးနှင့်ပတ်သက်သောရောဂါများပျောက်ကင်းသည်။
6. ပင်စိမ်း သတ္တုရည်ကို သံပုရာ ရည်ရောပြီ တစ်ပတ် တကြိမ် ခေါင်းလျှော်ပေးပါက သန်း ဗောက်ဖက်များ ကင်းဝေးမည် ။
7. သန့်ရှင်းသောမြေ အိုးရေထဲ တွင် ပင်စိမ်း အရွက် ထည့်၍ နေ့တိ်ုင်းသောက် လာပါက ရောဂါများကင်းဝေးမည်။
8. ပျက်ရာ ရှရာများကို ပင်စိမ်း အရွက် ထည့်ပေး လာပါက လျှင်မြန်စွာပြောက်ကင်း သည် ။
9. အိမ်တွင် ပင်စိမ်း အရွက်များ ထားခြင်း(သို့) အိမ်ပတ်ပတ် လည်တွင်စ်ိုက် ထားလျှင် ခြင် ၊ယင် ၊ပိုးကောင် ၊ မြွေများ ကင်းဝေးမည် ထို့ကြောင့် အိမ်တွင် ပင်စိမ်း အပင်စိုက် ခိုင်းခြင်းဖြစ် သည် ။
10. တစ်ရက်တွင် နာရီပေါင်း20 Oxygen ထုတ် လွတ်ပေးသောကြောင့် အိမ်တွင် စိုက် ရန် အကောင်း ဆုံးအပင် တစ် ပင်ဖြစ် ပါ သည် ။
ပငျစိမျးပငျအိမျမှာ စိုကျပြိုးသငျ့သော အကွောငျးရငျး
1. ပငျစိမျး အရှကျ ကိုနေ တိုငျးစားပေးခွငျးအားဖွငျ့ အူလမျးကွောငျး ဝမျးဗိုကျ နှငျ့ ပါးစပျတှငျဖွဈ တကျသောရောဂါ မြား ကငျးဝေးပီး အစာခွေ စနဈ ကိုကောငျးမှနျစေ ပါသညျ ။
2. ပငျစိမျး အရှကျကို ရထေဲတှငျ စိမျပွီး နတေိုငျးသောကျ လာပါက ဆီးခြိုရောဂါ မဖွဈအောငျ ကာကှယျပေးသညျ ။
3. ပငျစိမျး အရှကျကို ပထမရကျ ရခြေိုးမညျ့ရတှေငျ စိမျ ထားပွီး နောကျနရေ့ေ ခြိုးပါက ခြှေးအနံ့ မထှကျအောငျ ကာကှယျပေး သညျ ။
4. ပငျးစိမျး အရှကျကို သံပုရာရညျရော ၍ကြိတျပွီး အရပွေားပျေါ တှငျလိမျးပေးပါက အရပွေားရောဂါမြားဖွဈသောဝဲ နှငျးခူ နှငျ့ ယားနားမြားပြောကျ ကငျးသညျ ။
5. ပငျစိမျး စကေို့ ကောငျးစှာကြိတျပွီးစားပေးလြှငျ ဆီးနှငျ့ပတျသကျသောရောဂါမြားပြောကျကငျးသညျ။
6. ပငျစိမျး သတ်တုရညျကို သံပုရာ ရညျရောပွီ တဈပတျ တကွိမျ ခေါငျးလြှျောပေးပါက သနျး ဗောကျဖကျမြား ကငျးဝေးမညျ ။
7. သနျ့ရှငျးသောမွေ အိုးရထေဲ တှငျ ပငျစိမျး အရှကျ ထညျ့၍ နတေို့ငျးသောကျ လာပါက ရောဂါမြားကငျးဝေးမညျ။
8. ပကျြရာ ရှရာမြားကို ပငျစိမျး အရှကျ ထညျ့ပေး လာပါက လြှငျမွနျစှာပွောကျကငျး သညျ ။
9. အိမျတှငျ ပငျစိမျး အရှကျမြား ထားခွငျး(သို့) အိမျပတျပတျ လညျတှငျစိုကျ ထားလြှငျ ခွငျ ၊ယငျ ၊ပိုးကောငျ ၊ မွှမြေား ကငျးဝေးမညျ ထို့ကွောငျ့ အိမျတှငျ ပငျစိမျး အပငျစိုကျ ခိုငျးခွငျးဖွဈ သညျ ။
10. တဈရကျတှငျ နာရီပေါငျး20 Oxygen ထုတျ လှတျပေးသောကွောငျ့ အိမျတှငျ စိုကျ ရနျ အကောငျး ဆုံးအပငျ တဈ ပငျဖွဈ ပါ သညျ ။